Wararkii ugu dambeeyey ee Puntland & Garoowe oo ay kusoo wajahan yihiin madaxdii…. – Puntlandtimes
Wararkii ugu dambeeyey ee Puntland & Garoowe oo ay kusoo wajahan yihiin madaxdii….
GAROOWE(P-TIMES)- Magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa waxaa ka socda diyaar garaw xoogan oo loogu jiro soo dhoweeynta wafuuda ay hogaaminayaan madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Golaha xukuumadda Puntland ayaa kulan ay yeesheen kaga doodey soo dhoweynta wafuudaan oo shir looga hadlayo xaaladda dalka ku yeelan doona magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland, walow uu horay u baaqday.
Shirkaan ayaa waxaa lafilayaa in lagu lafa guro xiriirka u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah, xaaladaha ammaanka, dhaqaalaha, qaybsiga khayraadka iyo fulinta heshiisyadii horay loo gaarey.
GAAS in lala xisaabtamo oo wax layska weydiiyo waxyaalahan uu federalka ku haysto diyaar ma u yahay. Ninka raga ah waxaa fiican inuu khaladkiisa ku mashquulo si uu isu saxo.
Hadliye hadalkagu masaxna.waxa doda qaba wa shicibka puntland & dhaman mamilada somalida.maxa abdiwali ubar tilmansatay?? Waxad ogata Abdi wali ummad Ayaa Doratay xilkana udhibatay.waxad ogata qofki Abdi wali gaas wax kashega puntland ayuu ja,ifeyey. Dasturka aya sidas ah.